Tongasoa eto amin'ny Kilasy Grands Crus 2016 an'ny Saint Emilion
Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Tongasoa eto amin'ny Kilasy Grands Crus 2016 an'ny Saint Emilion
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Divay & Fanahy
Janoary 18, 2020
Louis XIV dia nanome voninahitra ny divain'ny Saint Emilion - nanambara fa "Saint Emilion, nekon'ny andriamanitra."
Hisaraka. Tsara Kokoa?
Ny divay Saint Emilion Grand Crus dia tsy nampidirina tamin'ny fanasokajiana Bordeaux tany am-boalohany 1855 ka ny Association de Grands Crus Classes de Saint Emilion dia niforona tamin'ny 1982 mba hampiroborobo ny kalitao sy ny hatsaran'ireo divay ao amin'ity faritra ity. Amin'izao fotoana izao dia misy 49 Chateaux ao amin'ny vondrona izay maneho faritra famokarana sahabo ho 800 ha sy 85 isan-jaton'ny tanimboaloben'ny Grands Crus Classes.
Ireo tanimboaloboka ireo dia maneho ny tsara indrindra fanehoan'i Merlot divay lehibe mibontsina amin'ny tany manankarena sy maro karazana miorina amin'ny lemaka vatosokay sy havoana mihodinkodina manodidina ny tanàna medieval ao Saint Emilion, tranokalan'ny UNESCO World Heritage.
Ny drafitra Syndicat Viticole ho an'ny fanasokajiana an'i Saint Emilion dia nanomboka tamin'ny 1930; na izany aza, dia tsy tamin'ny volana oktobra 1954 vao ofisialy ny fenitra nametrahana ny fototry ny fanasokajiana ary nanaiky handray ny andraikitra amin'ny fikirakirana ny fanasokajiana ny Ivotoerana Nasionaly frantsay momba ny antso (INAO). Ny lisitra voalohany dia nahitana crus Premier 12 grands ary 63 Grand crus.
Ny lisitra Saint Emilion dia havaozina isaky ny 10 taona, tsy toy ny fanasokajiana ofisialy ny divay Bordeaux tamin'ny taona 1855 manarona ny divay avy amin'ny faritra Medoc sy Fasana. Ny fanavaozana vao haingana indrindra ho an'i St. Emilion dia ny taona 2006 - saingy nambara fa tsy mandeha izy io ary naverina tamin'ny 1996 ny taona 2006 ny fanasokajiana.
Ny fanasokajiana divay Saint Emilion tamin'ny 2006 dia nolavina satria 15 Premiers Grands crus ary 46 Grands crus no notanterahin'ireo mpamokatra 4 tsy afa-po - nidina izy ireo; ny valiny - nolavina ny taona 2006 ary naverina tamin'ny laoniny ny fanasokajiana tamin'ny taona 1996. Ny fototry ny fifanolanana dia nifototra tamin'ny fisian'ireo mpikambana marobe ao amin'ny tontonana voarohirohy amin'ny fanombanana ny divay manana tombontsoa (izany hoe ny négociants dia nifampiraharaha tamina vitsivitsy tamin'ireo chateaux), ary ahiahiana ho tsy mizaha tavan'olona. Vakio ny lahatsoratra feno ao amin'ny divay.travel.
Hans Airways dia nanao sonia fifanarahana niaraka tamin'ny Air Logistics Group
State of emergency: Noraran'i Japon ny mpijery rehetra tsy ...
Manameloka ny fanavakavahana LGBT + ny vondrona eropeana satria mamoaka vaovao i Hongria ...